Bernardo Silva oo si cad u sheegay Kooxda uu ku biiri doono haddii uu ka tago Manchester City – Gool FM
Haaruun February 17, 2020
(Manchester) 17 Feb 2020. Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Manchester City, Bernardo Silva ayaa tilmaamay inuu u furan yahay inuu ku laabto kooxdiisii hore ee Benfica haddii ay doonayaan inay dib u soo celiyaan.
25-sano jirkaan ayaa ka tagay kooxda reer Portugal sanadkii 2014-kii, waxaana uu aaday Monaco kaddib markii uu kaliya saddex kulan u ciyaaray kooxda koowaad.
Isagoo la hadlayey Eleven Sports, waxa uu yiri Silva: “Horaan u sheegay dhowr jeer: ‘Waxaan leeyahay faaruqintan ah in aan wax yar ka tagay, sidaa darteed waxaan u maleynayaa inaan soo noqon doono.
“Haddii ay halkaas iga doonayaan, waxaan u maleynayaa inaan soo laaban doono.” ayuu Silva ku daray dahadalkiisa.
Hadallada Silva ayaa yimid ka hor inta aan la shaacinin in Man City laga mamnuuci doono kubbada cagta Yurub labada xilli ciyaareed ee soo socda kaddib markii la sheegay inay jabiyeen sharciga dhaqaale wanaagga ee Financial Fair Play.
Si kastaba ha noqotee, ganaaxan ayaa shaki geliyay mustaqbalka ciyaartoy badan oo kooxda koowaad ah, oo uu ku jiro Silva, kaasoo dhaliyay 29 gool 138 kulan oo uu saftay tan iyo markii uu ku soo biiray Citizens sanadkii 2017-kii, waxaana uu ka mid yahay kuwa loo maleynayo inay xagaaga ka tagayaan Etihad.